Thursday July 05, 2018 - 20:48:42 in Wararka by Super Admin
Inta badan madaxweynayaasha wadamada Bariga qaaradda Afrika iyo bartamaha qaaradda ayaa kasoo qeyb galay munaasabad lagu furayay xarun ganacsi oo ka dhacday wadanka Jabuuti.
Ismaaciil Cumar Gelle oo ah madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in dalkiisa laga hirgeliyay mashruuca ganacsi ee ugu weyn qaaradda Afrika oo dowladda shiinaha ay ku maalgelinayso qaaradda sida uu hadalka u dhigay.
Wajiga koowaad ee Shiinaha maanta uga furtay dalka Jabuuti ayaa lagu sheegay aag ganacsi oo xor ah, mas'uuliyiin ka socotay dowladda shuuciyadda Shiinaha ayaa tallaabada ku tilmaamay mid uu ku kacayo adduun lacageed oo dhan 340 Milyan oo dollar.
Aaga gancsiga xorta ah ayaa gaaraya illaa 50 kiloowmitar oo isku wareeg ah kaaso noqonaya bakhaar lagu xareeyo badeecadaha iyo alaabaha la dhoofinaya.
Waxaana la filaaya in aaga ganasiga xorta ah la geliyo ganacsi uu ku kacayo7 bilyan oo doolar muddo 2 sanno ah iyo inuu dadka deegaanka siiiyo ilaa 15,000 oo fursado shaqo ah.
Dalalka deriska ah ayaa badeecadaha loo soo dhoofiyo soo marsadaa dekedda Jabuuti sida Itoobiya, aaggan ayaa leh Bakhaarro waaweyn, garoomo diyaaradeed iyo keydad lagu dajinayo badeecadaha laga dhoofinayo dekadaha Jabuuti ama badeecadaha lagasoo dajinayo.
Dowladda Shiinaha oo tartan dhaqaale oo baaxad leh kula jirta dowladda Mareykanka ayaa saldhig melleteri ku leh wadanka Jabuuti, mas'uul shiineys ah oo khudbad ka jeedinayay munaasabaddii lagu furayay aagga ganacsi ayaa sheegay in kumanaan qof Jabuutiyaan ah ay mashruucan shaqa ka helayaan.
Dibad baxyo ka dhan ah Botafaliiqa oo ka socda Wadanka Al Jazaa'ir.